Umxholo ekuphela kwaWo oya kukufuna kwiWindowsPress: Avada | Martech Zone
Kule minyaka ilishumi, bendisenza ngokobuqu ndipapasha iiplagi, ndilungisa kwaye ndiyila imixholo yesiko, kwaye ndisebenzisa iWindowsPress kubaxhasi. Ibe coaster roller kwaye ndinezimvo eziqinisekileyo kakhulu malunga nokuphunyezwa endikwenzileyo kwiinkampani ezinkulu nezincinci.
Ndiye ndagxeka abakhi -Iiplagi kunye nemixholo evumela uhlengahlengiso olungathintelwanga kwiindawo. Bakhohlisile, bahlala bethambisa kakhulu ubungakanani bephepha lewebhu ngelixa bethoba isiza ngokubonakalayo. Uninzi lomsebenzi esiwenzayo xa sithatha umsebenzi wophuhliso lwewebhu kubathengi sisusa ikhowudi yokuthengisa kunye ne-in-line engagcini nje ngokucothisa isiza kodwa ikwathintela ngamandla amandla enkampani ukwenza utshintsho kwindawo yawo.
Wamkelekile Umxholo weFusions 'Avada
Umxholo Fusion wakhe ngokunyanisekileyo owona mxholo ungcono kunye nokudityaniswa kweplagi endikhe ndasebenza kunye nabo # 1 yokuthengisa umxholo ngalo lonke ixesha, Avada. Yenziwe ngokunyaniseka kakuhle kangangokuba ndiyiphumeza nganye kwisayithi yam nakumthengi ngamnye wam. Nganye yezinto zokwakha zivumela ulwenziwo oluncinci- into oyifunayo ngokwenene ukuyitshixela phantsi ukunqanda umxhasi okanye umhleli ogqithisileyo ukwenza uphawu lophawu lwendawo kunye nokwazisa iingxaki ezifuna umsebenzi ongaphezulu wokuzilungisa.
Baye bagcina umxholo ohlukileyo kwi-plugin, okwenza ukuba umntu akwazi ukufaka umxholo omtsha-ngelixa egcina ukusebenza ngokwakhiwa kwesiko ngokuseta iiplagi. Inkqubo ye- Umxholo we-Avada intle, iphucukile, kwaye kulula ukusebenzela kuyo. Joyina ngaphezulu kwe-380,000 yabathengi abonelisekileyo ekuthengeni le mxholo umangalisayo!
Jonga imizekelo yeAvada
yethu Highbridge Indawo ikwiAvada
Oko ndakha indawo yokuqala yeAvada, bendisebenzisa lo mxholo kubo bonke abathengi bethu. Kwaye, ekugqibeleni ndayihlaziya eyethu Highbridge indawo ngokunjalo. Jonga indlela entle ngayo-kwaye kwakulula kakhulu ukwakha ngelixa uphendula ngokupheleleyo.
Ubeko olukhoyo ngalo mxholo alunasiphelo, kunye namakhulu ezinto kunye namandla okwenza ukuba kube liphupha lokuphumeza. Ndithanda kakhulu ukuba ndingagcina izikhongozeli kunye nezinto zokuphinda zisetyenziswe kwihlabathi liphela kwamanye amaphepha ndisebenzisa iFusion Builder. Yinkqubo yokwakha iphepha egqibeleleyo evelisa ubeko oluqhutywa ziifayile zeCSS ngaphakathi kwesiza kunokufaka ngaphakathi kwimigca yamaphepha.
Iimpawu zoMakhi weFusion zibandakanya
Ukudityaniswa kweKholamu eyakhiwe kwangaphambili -Endaweni yokongeza ikholamu enye ngexesha, unokukhetha ngokulula ukongeza iiseti ezipheleleyo zobungakanani bekholamu nganye esibonelela ngayo kwiikholamu ezi-1-6.
Amacandelo okuwa kunye neziqulatho -Buyisa nasiphi na isitya esinye ngonqakrazo ukugcina isoftware yokuthengisa izindlu nomhlaba, okanye ukuwa zonke izikhongozeli ngaxeshanye kwindawo ephambili yolawulo.
Qamba ngokutsha iziqulatho -Mane ubeke isikhombisi sakho kwigama lesikhongozeli kwaye unike igama. Oku kukuvumela ukuba ukhawuleze kwaye ubonakalise ngokulula amacandelo kwiphepha lakho ngokukhangela.
Tsala kwaye ulahle izinto zomntwana -Izinto ezinje ngee-tab, iibhokisi zomxholo, iitoggs kunye nokunye okuvumela ukuba kwenziwe izinto ezingaphezu kwesinye ngoku zinokucwangciswa ngokulula ngokutsala kunye nokwehla.
Amagama aSiko ngeziNto zabaNtwana Ujongano olutsha lwe-Fusion Builder luchola eyona nto iphambili kumntwana oyifakayo kwaye uyibonise ngokuchongwa ngokulula.
Umsebenzi wokuKhangela ukuze ufumane ngokuLula izinto kunye nezinto -Isikhongozeli ngasinye, ikholamu kunye nefestile yento inendawo yokukhangela ephezulu ekunene ukukhangela ngokulula kwaye ufumane into oyifunayo ngegama elinye elingundoqo.
Thenga umxholo weAvada ngoku
Yinkqubo entle. Nalu uluhlu lwezinto eziphambili zeAvada:
Ukubhengezwa: Ndililungu elinekratshi kwi-Themeforest apho Umxholo we-Avada iyathengiswa.
tags: i-avadaOwona mxholo wegama liphezulufusionumakhi wefusionumxholo wefusionumakhi wephephaisihlokoukudibanisa umxholoWordPressumxholo wegama